Sisebenza kangakanani iSicwangciso B, kwaye sisebenza ixesha elide kangakanani? - Ulwazi Lweziyobisi | Eyenkanga 2021
Inkampani, Ukuphuma Impilo-Ntle Inkampani, Imfundo Yezempilo Ekuhlaleni Ulwazi Lweziyobisi Inkampani, Iindaba Imfundo Yezempilo, Iindaba Iziyobisi Vs. Umhlobo Iindaba Cinezela Imfundo Yezempilo Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Iindaba, Impilo Imfundo Yezempilo, Impilo Uluntu, Inkampani
Eyona >> Ulwazi Lweziyobisi >> Sisebenza kangakanani iSicwangciso B, kwaye sisebenza ixesha elide kangakanani?
Sisebenza kangakanani iSicwangciso B, kwaye sisebenza ixesha elide kangakanani?
Nokuba ulibele ukuthatha ipilisi okanye ikhondom yaphuka, usenalo ukhetho lokuthintela ukukhulelwa-kodwa kufuneka uthathe amanyathelo ngokukhawuleza. Cwangcisa B inyathelo elinye yipilisi emva kwentsasa enokuthintela ukukhulelwa emva kokwabelana ngesondo ngokungakhuselekanga okanye ukusilela kolawulo lokuzalwa. Ukuthintela inzalo okungxamisekileyo kunokunika uxolo lwengqondo, kodwa uninzi lwabasetyhini lusazibuza: Sisebenza kangakanani iSicwangciso B?
Isicwangciso B sisebenza njani
Isicwangciso B sisiyobisi seprogesterone esinehomoni levonorgestrel. I-Levonorgestrel ithintela ukukhulelwa ngeendlela ezahlukeneyo, kuxhomekeke kwindawo okhoyo kuyo xa usexesheni. Kungayeka okwexeshana ukukhutshwa kweqanda kwi-ovary okanye kuthintele iqanda elichumileyo ekubeni linamathele esibelekweni. Isicwangciso B siyasebenza ukuba sithathwe kwisithuba seeyure ezingama-72 emva kwendlela yesiqhelo yolawulo lokuzalwa isilele okanye ngaphakathi kweeyure ezingama-72 emva kokuba neentlobano zesini ezingakhuselekanga.
Nje ukuba ungene kwigazi, elihlala lithatha iiyure ezimbalwa, i-levonorgestrel iqala ukuchaphazela ii-ovari okanye i-uterine lining. Nangona kunqabile, abanye abantu basetyhini banokuphosa ngaphakathi iiyure ezimbini yokuthatha ipilisi yesiCwangciso B. Ukuba oku kuyenzeka kuwe, kungcono ukuba ulandele umboneleli wakho wezempilo kwaye ubuze ukuba ngaba kufuneka uthathe idosi yesibini okanye hayi.
Unokuthatha iSicwangciso B nangaliphi na ixesha ngexesha lomjikelo wakho, kodwa senzelwe kuphela ukuba sisetyenziswe njengepilisi yokuthintela ukukhawulezisa. Kuba ukuthatha uthintelo lokuthintela ukungxamiseka kuchaphazela iihormoni zakho kwaye kulwa nemisebenzi yendalo yomzimba wakho, inokubangela iziphumo ebezingalindelekanga. Nazi ezinye zeempembelelo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo kwabasetyhini:
Iintlungu ezisezantsi esiswini
Ukubala / ukutshintsha ukopha exesheni
Ukuba uthathe iSicwangciso B kwaye uqala ukufumana iintlungu ezisezantsi esiswini kwiiveki ezintathu ukuya ezintlanu emva kokuthatha, kuya kufuneka ufune iingcebiso kwezonyango ngokukhawuleza. Ukuba nesiphumo esithile secala ngeli xesha kunokuthetha ukuba une-ectopic pregnancy, nokukhulelwa okwenzeka ngaphandle kwesibeleko. Ukukhulelwa kwe-Ectopic kunokuba sisongelo ebomini, yiyo loo nto kubaluleke kakhulu ukuthetha noochwephesha kwezononophelo lwempilo ngoko nangoko ukuba ufumana olu phawu.
Sisebenza kangakanani iSicwangciso B?
Isicwangciso B sisipilisi sokuthintela ukukhawulezisa esisebenza ngokufanelekileyo. Isebenza kakuhle ukukhusela ukukhulelwa zingaphelanga iintsuku ezintathu zesenzo esingakhuselekanga sesondo, kodwa isebenza kakhulu (> 97%) xa ithathwa kwiiyure ezingama-24 zesehlo, uthi UMadeline Sutton , OB-GYN, ugqirha wezifo zonyango kunye nowayesakuba liGosa eliGunyazisiweyo kwiCDC. Ipilisi emva kwentsasa njengeCwangciso B inokuthintela ukukhulelwa Iipesenti ezingama-75 ukuya kuma-89% yexesha ukuba uyithatha kwisithuba seentsuku ezintathu zesondo esingakhuselekanga.
Nangona kungekho mda kangaphi apho ungathatha khona iSicwangciso B, ukuthatha ngaphezulu kwedosi enye akunakuyenza isebenze ngakumbi. Ukuba ulala ngesondo ungakhuselekanga kwakhona emva kosuku uthathe iSicwangciso B, kuya kufuneka uthathe elinye idosi. Thatha ipilisi enye kwisenzo ngasinye sesondo esingakhuselekanga, kodwa khumbula ukuba isiCwangciso B asinakuthatha indawo yolawulo lokuzalwa rhoqo. Thetha nomboneleli wakho wezempilo malunga neyona ndlela ifanelekileyo yolawulo lokuzalwa kwakho.
Ngubani ekufuneka hayi uthathe iSicwangciso B?
Nangona isiCwangciso B sisebenza kakhulu, asilunganga kuye wonke umntu kwaye asisebenzi kangako phantsi kwezi meko zilandelayo:
Ayisebenzi kangangexesha elide ukuba ulinde ukuyithatha, ngoko ke yithathe ngokukhawuleza.
Ayisebenzi ukuba sele sele unamaqanda.
Ukuba unayo i-BMI engama-30 okanye ngaphezulu, a IUD yobhedu okanye Ella emva kwepilisi kungangcono ukhetho kuwe. IParagard (ubhedu) IUD phantse 99.9% Iyasebenza ekuthinteleni ukukhulelwa ukuba ngaba ifakwe ngaphakathi kweentsuku ezintlanu emva kokwabelana ngesondo ngokungakhuselekanga, kwaye nje ukuba ifakwe, inokuthintela ukukhulelwa ukuya kuthi ga kwiminyaka eli-12.
Izinto zokuthintela ukukhulelwa zika-Ella zisebenza ukuthintela ukukhulelwa ukuya kwiintsuku ezintlanu emva kokwabelana ngesondo kwaye kunciphisa umngcipheko wokukhulelwa malunga 85% . Nangona kunjalo, awufanele uthathe iSicwangciso B okanye ezinye iipilisi zakusasa-emva kwe-levonorgestrel ukuba uthathe u-Ella ukusukela kwixesha lakho lokugqibela.
Qaphela: Ngokungafaniyo nepilisi ye-B, i-Ella kusasa-emva kwepilisi ifuna ukuba ugqirha ayifumane. IParagard IUD iyafumaneka ngugqirha nangeklinikhi yocwangciso losapho. Uya kuyidinga i-OB-GYN yakho ukufaka i-IUD, ke ukuba uthatha isigqibo sokuhamba ngaloo ndlela, tsalela iofisi ngokukhawuleza kwaye uchaze imeko ukuze bakungenise ngokukhawuleza ukufaka i-IUD.
Ukudibana kwesiCwangciso B
Ngokuqinisekileyo amayeza kunye namayeza inokunciphisa ukusebenza kwesiCwangciso B kuba zinee-enzymes ezinciphisa uxinzelelo lweeprogestins egazini. Imizekelo yamayeza anjalo kunye neemveliso zamayeza zibandakanya:
Isicwangciso B asithinteli ii-STD
Enye into ekufuneka uyiqaphele kukuba iSicwangciso B asikhuseli kwizifo ezosulela ngokwabelana ngesondo. Ekuphela kwendlela onokuzikhusela ngayo kwi-HIV / AIDS, kwi-herpes, kwaye i-chlamydia, i-hepatitis, okanye ezinye ii-STD kukusebenzisa ngokufanelekileyo iikhondom zelatex okanye ukuziqhelisa. Abanye isitofu inokuthintela i-hepatitis B kunye ne-HPV kodwa ayizukukhusela kwezinye ii-STD. Inkqubo ye- i-CDC icebisa ukuba abantwana bafumane idosi yabo yokuqala Isitofu sokugonya se-HPV kubudala beminyaka eli-11 ukuya kweli-12, kodwa isitofu sokugonya sikwacetyiswa kuye wonke umntu ukuya kwiminyaka engama-26 (kunye nabantu abadala abathile abaneminyaka engama-27 ukuya kwengama-45, kuxhomekeke kumngcipheko) ukuba khange bagonywe.
Ezinxulumene: Ngaba kufuneka ufumane isitofu sokugonya i-hepatitis B?
Wazi njani ukuba iSicwangciso B sisebenzile?
Indlela yodwa yokwazi ukuba isiCwangciso B sithintele ukukhulelwa kukulinda ixesha lakho elizayo. Ukuba ixesha lakho lifika ngaphezu kweveki emva kwexesha, unokufuna ukuqaphela ukuthatha uvavanyo lokukhulelwa. Abanye abantu basetyhini baya kuva ukopha kancinci emva kokuthatha iSicwangciso B kwaye banokuthatha oku njengophawu lokuba kuyasebenza ukukhusela ukukhulelwa. Nangona kunjalo, ukubonwa yinto elindelekileyo yecala lesiphelo sepilisi emva kwentsimbi kwaye ayibonisi ukuba inayo okanye ayikuthintelanga ukukhulelwa. Ukufumana ixesha lakho kunye / okanye uvavanyo lokukhulelwa olubi kuphela kwendlela yokwazi ngokuqinisekileyo.
Isicwangciso B asiyiyo ipilisi yokukhipha isisu kwaye ayisayi kuphelisa ukukhulelwa ukuba sele ukhulelwe. Ukuba ngempazamo uthathe iSicwangciso B emva kokuba sele ukhulelwe, kuhle ukwazi ukuba abukho ubungqina bokuba kuyingozi kwiintsana ezisakhulayo. Ukuba ayisebenzi kwaye ukhulelwe, akunakulindeleka ukuba ibangele ingozi kuwe okanye kusana lwakho. Ukuthetha nomboneleli wakho wezempilo yeyona ndlela ifanelekileyo yokufunda ngeendlela zokucwangcisa usapho eziza kusebenza ngcono kuwe.
Sisebenza ixesha elingakanani iSicwangciso B?
Kungcono ukuthatha iSicwangciso B ngokukhawuleza kuba kusebenza kakuhle kwiintsuku ezintathu zokuqala. Ungayithatha ukuya kwiintsuku ezintlanu emva kokwabelana ngesondo ngokungakhuselekanga, kodwa ayizukusebenza kwangolo suku lwesihlanu. Nje ukuba ungeniswe, kusebenza kuphela malunga neentsuku ezintlanu. Emva kwesi sixa sexesha, iihormone ezazisesipilini ziya kuba ziwushiyile umzimba. Elona xesha liphezulu lokuhlala emzimbeni lihambelana nexesha elinokuthi isidoda sihlale ngaphakathi kwinqanaba lokuzala-malunga neentsuku ezintlanu ukuya kwezintandathu.
Okukwintsusa-Usengakhulelwa emva kokuthatha iSicwangciso B
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba usengakhulelwa nasemva kokuba uthathe iSicwangciso B. Kananjalo, ukuba uthatha iSicwangciso B emva kokwabelana ngesondo ngokungakhuselekanga kwaye emva koko ulalane ungakhuselekanga kwakhona, kuya kufuneka uthathe enye ipilisi. Ifom yexesha elide yolawulo lokuzalwa yeyona ndlela yokuthintela ukukhulelwa. Ukhetho lolawulo lokuzalwa lwexesha elide lubandakanya ipilisi yolawulo lokuzalwa, ii-IUDs, izinto zokufakelwa, ukudubula, iipatches, iikhondom zerhasi, kunye nemisesane yelungu lobufazi (ukuba isetyenziswa ngalo lonke ixesha usabelana ngesondo).
Ungathenga phi iSicwangciso B
Abantu abadala banokuthenga iSicwangciso-B seNyathelo elinye kwi-counter ngaphandle komyalelo kwiindawo ezininzi zokuthengisa iziyobisi nakwiikhemesti. Unokuyifumana kumaziko ocwangciso-ntsapho okanye kwiiklinikhi zesebe lezempilo.
Ngelishwa, isiCwangciso B sinokubiza kakhulu malunga ne- $ 38 ukuya kwi- $ 58 ngepilisi nganye. Uninzi lweenkampani zeinshurensi ziya kuhlawula iindleko ukuba umboneleli wezempilo ukumisela njengothintelo olungxamisekileyo lokuthintela ukukhulelwa. Ukuba awukwazi ukufumana amayeza, usenokukwazi ukuwafumana simahla okanye ngexabiso elisezantsi kuBazali obucwangcisiweyo.
Enye indlela yokonga imali kwipilisi emva kwentsasa yi-SingleCare's ikhuphoni leziyobisi . Ezi coupon zingakunika izaphulelo ukuya kuthi ga kwi-80% isaphulelo, kodwa kuya kufuneka ufune amayeza kumboneleli wakho kuqala. I-singleCare ibonelela ngezaphulelo kwezinye iindlela zolawulo lokuzalwa, nazo. Funda ngendlela yokufumana ulawulo lwasimahla ngaphandle kwe-inshurensi yezempilo apha .
Yeyiphi i-OTC yokunyanga amayeza endinokugcina kuwo?
Ngaba kukhuselekile ukuthatha ibuprofen kunye neTylenol kunye?
Ngaba kukhuselekile ukuthatha ibuprofen kunye ne-tylenol ngaxeshanye
ungathatha isicwangciso b ipilisi emva kweentsuku ezi-3
kutheni amathe am amdaka kwaye eshinyene
Kuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokuba i-topamax isebenze ukunciphisa umzimba
itshathi yeglucose yegazi kuhlobo 2 lweswekile